बजेटपछि किन ४४ अङ्कले ओरालो लाग्यो शेयर बजार ? - Sagarmatha TV
काठमाडौँ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा धितोपत्र बजारप्रति सकारात्मक सोचका साथ नीति तथा कार्यक्रम समावेश गरे पनि त्यसको प्रभाव भने उल्टो देखिएको छ। यही जेठ १५ गते आगामी आवको बजेट सार्वजनिक भएपछि शेयर बजारमा कारोवार मापक नेप्से परिसूचक ४४.३२ बिन्दुले ओरालो लागेको छ।
बजेटपछि बजार नौ दिन खुला रह्यो। बजेटले केही नीतिगत व्यवस्था गरेपनि बजार भने निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ। यस साता पनि बजारको मापक सूचक ओरालो लागेरै बन्द भएको छ। केही कम्पनीको शेयर अस्वभाविक वृद्धि भइरहेको छ ।
गत बिहीबार अर्थात् यही जेठ २३ गते एक हजार २८४.५९ अङ्कमा रहेको नेप्से परिसूचक यस साताको अन्तिम दिन २.९२ बिन्दुले घटेर एक हजार २६९.५५ बिन्दुमा झरेको छ। गत बिहिबारदेखि यस साताको बिहिबारसम्म बजार १५.०४ बिन्दुले घटेको छ। आइतबार काठमाडौँ उपत्यकमा सार्वजनिक बिदा परेका कारण शेयर बजार बन्द रह्यो। सोमबार खुलेको बजारमा कारोवार मापक नेप्से परिसूचक ८.७८ अंकले घट्यो।
उक्त दिन विकास बैंक, उत्पादन तथा प्रशोधन र सामूहिक लगानी कोष उपसमूहमा सामान्य सुधार आएपनि बाँकी सूचक ओरालो लागेका थिए। कूल १७३ वटा कम्पनीको १८ लाख ५९ हजार २४८ कित्ता शेयर रु ५८ करोड ८८ लाख २२ हजार ६२५ मूल्यमा खरीद बिक्री भए ।
यस्तै मंगलबार कारोबार मापक नेप्से परिसूचक ०.१७ बिन्दुले बढेर एक हजार २७५.९८ अङ्कमा थामियो। सो दिन कूल १७४ कम्पनीका १५ लाख नौ हजार ८८५ कित्ता शेयर रु ४८ करोड आठ लाख ७६ हजार ९८६ मा खरीद बिक्री भए।
बुधबार पुन कारोबार मापक नेप्से परिसूचक ३.५० बिन्दुले घटेर एक हजार २७२.४८ अङ्कमा पुग्यो। कूल १७४ कम्पनीका १८ लाख ७१ हजार ८०९ कित्ता शेयर रु ५० करोड २६ लाख ८२ हजार ८८१ मा खरीद बिक्री भए। कारोबार भएका १२ उपसमूहमध्ये तीन उपसमूहको मात्रै शेयर बढ्यो।
बिहिबार पनि बजारले ओरालोको यात्रा तय गर्‍यो। उक्त दिन नेप्से परिसूचक २.९२ बिन्दुले घटेर एक हजार २६९.५५ बिन्दुमा झरी बजार बन्द भयो। कूल १७० कम्पनीको १४ लाख २३ हजार ६८७ कित्ता शेयर रु ४५ करोड ६५ लाख छ हजार ९४५ मूल्यमा खरीद बिक्री भए।
यस साता स्वाभिमान लघुवित्त वित्तीय संस्थाको छ लाख १८ हजार ६१० कित्ता साधारण शेयर, नेपाल कम्युनिटी डेभलपमेन्ट बैंकको ५२ हजार ६४० कित्ता शेयर लाभांश र यूनियन हाइड्रो पावरको कूल ७५ लाख कित्ता साधारण शेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएका छन्।
धनगढीमा बसपार्क हस्तान्तरण कार्यक्रममा स्थानीयको अवरोध
नेवार समुदायको प्रमुख जात्राका रुपमा मनाईने ईन्द्रजात्रा धुमधामका साथ मनाइयो
सैनामैना ६ को शिक्षामा उल्लेख्य प्रगति
क्रिकेट र फुटवलका राष्ट्रिय टोलीका कप्तानलाई प्रवल जनसेवा श्री पदक
संविधान दिवसः कतै खुसी त कतै विरोध
स्वास्थ्य संस्थाको पहुँचमा पुग्न नसक्दा राउटेको मृत्युदर बढ्यो
एमाले स्थायी कमिटी बैठक बस्दै, तीनवटा दस्तावेजमाथि छलफल हुने
इन्द्रजात्राः राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कुमारी यात्रा हेर्न बसन्तपुर
कांग्रेस नेता विश्वप्रकाश शर्माको प्रस्तावः राष्ट्रपति एक पटक, प्रधानमन्त्री दुई पटक
मसालका पुराना नेता खगुलाल गुरुङको निधन
पछिल्लो २४ घण्टामा संक्रमणमुक्त हुनेको संख्या दोब्बर
पछिल्लो २४ घण्टामा ७३४ जनामा कोरोना पुष्टि, १२ जनाको मृत्यु
महोत्तरीमा झडप हुँदा एकको मृत्यु
काबुलमा एयरपोर्टतर्फ जाँदै गरेका एक जना जर्मन नागरिकमाथि गोली प्रहार
बलिउड अभिनेता अक्षय कुमारको फिल्म ‘बेलबटम’लाई तीन देशमा प्रतिबन्ध
काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा निरन्तरता दिने तयारी
एउटै परेवाको मूल्य साढे १८ करोड !
एनआरएनएको अध्यक्षमा कुल आचार्यको उमेद्वारी घोषणा
कांग्रेस क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान